Himalaya Dainik » आँचलको प्रेम चर्चामा , को हुन प्रेमि ?
आँचलको प्रेम चर्चामा , को हुन प्रेमि ?
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका आचल शर्मा बेला बेलामा कुनै नायक वा अन्य ब्यक्तिसँग प्रेममा रहेको भन्दै चर्चामा आउछिन् ।उनी चलचित्रमा प्रवेश गरेपनि आप जोडी भन्दै नाय पल शाहसँग प्रेम रहेको भन्दै कयौ पटक हल्ला चलेको थियो ।
उनीहरुले धेरै म्युजिक भिडियो र फिल्ममा सँगै काम गरिसकेका छन् ।तर अहिले आचँल शर्माको डाक्टर उदिप श्रेष्ठसँग प्रेम रहेको भन्दै बजार तातेको छ । किनभने केही समयअघि उनले आफु भारतमा रहदा पनि धेरै मिस गरिरहेको भन्दै इन्स्टाग्राममा स्टोरी राखेकी थिइन् ।
त्यसपछि एक अन्तरवार्तामा आचललाई उदिससँग तपाईको प्रेम सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गर्दा उदिप नजिकको साथी मात्र भएकी बताएकी थिइन् । तर उदिप आफुलाई राम्रो लाग्ने थालेको बताएकी छिन् । हाल उनी चलचित्रमा ब्यस्त छिन्।
चितवन , मृतक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको पो*ष्टमार्टम रि*पोर्ट चितवन आइपुगेको छ । चितवनका प्रहरी प्रमुख (एसपी) दान बहादुर मल्लका अनुसार आज (आइतवार) पो*ष्टमाटम रि*पोर्ट चितवन आइपुगेको हो । उनले पो*ष्टमाटम रि*पोर्ट आइपुगे पनि अध्ययन हुन बाँकी रहेको बताए । यसअघि नै भिडियोको डिजिटल ल्या*ब रि*पोर्ट चितवन आइसकेको थियो । यस्तै आजै पी*डित परिवारले दिएको कि*टानी जा*हेरीको पत्र पनि चितवन आइपुगेको मल्लले बताए ।
मल्लका अनुसार आज परिवारले महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौं मार्फत रवि लामिछाने सहित पक्राउ परेका युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्की बि*रुद्ध कि*टानी जा*हेरी दिएका थिए । मृ*तककी श्रीमती सम्झना घिमिरे पुडासैनीले आफै उपस्थित भएर उ*जुरी दिएकी हुन् । प्रहरीले घ*टनाका सम्बन्धमा गहिरो अ*नुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अदालतले थपको पाँच दिनको म्या*द भोली सकिदैछ । घ*टनको दुई हप्तापछि किटानी जाहेरीसंगै घ*टनासंग सम्बन्धित प्रमाणहरु जुट्दै गएका हुन् ।
प्रकाशित मिति २ भाद्र २०७६, सोमबार ०६:४३